Ny minisitry ny fizahan-tany any Jamaika dia nankany Portugal noho ny Forum manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Ny minisitry ny fizahan-tany any Jamaika dia nankany Portugal noho ny Forum manerantany
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • fivoriana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Portugal • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany
Ny minisitry ny fizahantany any Jamaika, Bartlett, hifanakalo hevitra momba ny dia maharitra amin'ny forum any Portugal
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, dia vonona handray anjara amin'ilay "Tontolo iray ho an'ny dia lavitra - Évora Forum" andrasana fatratra, hetsika indostrialy maharitra maharitra manerantany amin'ny 16 sy 17 septambra any Évora, Portugal.
Ny fampiantranoana ny hetsika dia ny fitsidihana an'i Portugal, UNWTO, WTTC, ary ny ivon-toerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny krizy any Jamaika.
Ny Minisitra Bartlett dia handray anjara amin'ny adihevitra ambaratonga avo arakaraka ny Travel Editor an'ny CBS News Peter Greenberg.
Ny fihaonambe dia hanakaiky ireo lohahevitra izay mampiorina ny faharetana.
Ny hetsika dia karakarain'ny Eventiz Media Group, vondrona fampahalalam-baovao lehibe indrindra eto Frantsa, miaraka amin'ny Global Travel & Tourism Resilience Council. Ny hetsika dia atolotra miaraka amin'ny fanohanan'ny Visit Portugal, ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO), ny World Travel and Tourism Council (WTTC), ary ny Global Tourism Resilience and Crisis Management Center (GTRCMC).
Izy io dia hitondra mpitondra manerantany, avy amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina, hiara-midinika ny fomba hanovana ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ary handinika ny fomba handrosoana maharitra amin'ny sehatry ny fizahan-tany.
Fizahan-tany any Jamaika Ny minisitra Bartlett dia vonona handray anjara amin'ny adihevitra avo lenta momba ny “Covid-19: Secteur mahazaka mizotra amin'ny fifanarahana vaovao amin'ny fangatahana fitarihana vaovao, ”notarihin'i Peter Greenberg, tonian-dahatsoratry ny Travel ao amin'ny CBS News. Ity fivoriana ity dia hizaha ny fomba fiasan'ny governemanta sy ny indostria miaraka amin'ny fitarihana amin'ny alàlan'ny fomba iray mamela ny sehatra hisarika ny politika.
Hanatevin-daharana ny minisitra ny Lehibeny Jean-Baptiste Lemoyne, sekreteram-panjakana misahana ny fizahan-tany, France; Ny Andriamatoa Fernando Valdès Verelst, sekreteram-panjakana misahana ny fizahan-tany, Espana; ary ny Andriamatoa Ghada Shalaby, Minisitra lefitra misahana ny fizahan-tany sy ny fahagolan-tany, Repoblika Arabo Egypt.
Ireo mpandahateny hafa amin'ity hetsika ity dia misy ny Prof. Hal Vogel, mpanoratra, Profesora momba ny toekarena fitsangantsanganana, University of Columbia; Julia Simpson, Filoham-pirenena ary CEO, WTTC; Therese Turner-Jones, Tale Jeneraly, Departemantan'ny firenena Karaiba, Banky Iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana amerikana ary Rita Marques, sekreteram-panjakana Portiogey misahana ny fizahan-tany.
Dr. Taleb Rifai, filoha lefitry ny GTRCMC ary sekretera jeneralin'ny UNWTO teo aloha, ary Prof Lloyd Waller, Tale mpanatanteraka, GTRCMC, dia voamarina ho mpikabary ihany koa.
Nomarihin'ny mpikarakara fa ny andiany voalohany amin'ny hetsika dia hifantoka amin'ireo singa manan-danja amin'ny indostria izay tsy maintsy anovana ny fanovana, hamantatra ireo dingana tokony horaisina sy hanamafisana ireo vahaolana hapetraka.
Ny fihaonambe dia hanatona lohahevitra tena ilaina amin'ny faharetana toy ny fiovan'ny maodely ara-toekarena, ny fiatraikany amin'ny toetrandro, ny fiantraikan'ny fizahan-tany eo amin'ny fizahan-tany, ny fiovan'ny morontsiraka sy ny ranomasina ary koa ny politika momba ny fambolena sy ny karbaona.
Ny hetsika dia hanana famerana ho an'ny mpanatrika 350 manokana fa halefa mivantana amin'ireo solontena virtoaly an'arivony ihany koa. Miala eto amin'ny nosy ny minisitra Bartlett anio 14 septambra ary kasaina hiverina amin'ny 19 septambra.
Kanadianina dia voatery manao vaksiny ho an'ny ...
(UPDATE) CDC dia namoaka hafatra maika ho an'ny Amerikanina ...
Misokatra indray i Shily ho an'ireo mpizahatany vita vaksiny feno
Ny CDC dia namoaka torolàlana maika momba ny Pfizer na Moderna ...
Ny sendika mpitatitra eropeana dia mitaky asa farany ambany ...
Marcy MacDonald hoy:
September 15, 2021 ao amin'ny 01: 18
Ahoana no ahafahako - mpikambana ao amin'ny Gazety - mitazona tapakila ho an'ny Press?